नारायण ढुङ्गाना काठमाडौं । नेपाल सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेको छ । दुई खर्ब रुपैयाँको लगानी भएको र वार्षिक १५० अर्ब रुपैयाँको कारोवार हुँदै आएको सिमेन्ट उत्पादनमा नेपाल यो वर्षदेखि आत्मनिर्भर भएको..
काठमाडौं । यस वर्षको प्रणय दिवसका लागि रु एक करोड ५० लाख मूल्यको एक लाख ६० हजार ‘स्टिम’ गुलाफ आयात गरिने भएको छ । माग बढेकाले गत वर्षको तुलनामा यस..
टिमुरको तेल एक लिटर कै १७ हजार रुपैयाँमा बिक्री
सल्यान । सल्यानको शारदा नगरपालिका–१५ मा गएको तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको माँ लक्ष्मी हर्बल उद्योगले टिमुरबाट तेल उत्पादन हुँदै आएको छ । उत्पादित उक्त तेलको माग स्वदेशसँगै विदेशमा पनि बढ्न थालेको..
फुडमाण्डुको अनलाइन फुड फेस्टिभल आजदेखि, १ रुपैयाँमै खाना अर्डर गर्न सकिने
काठमाडौं । नेपालको पहिलो फूड डेलिभरी कम्पनी फुडमाण्डूले अनलाईन फुड फेस्टिभल २०१९ आयोजना गरेको छ । अघिल्लो वर्ष पनि संचालन गरिएको अनलाइन फुड फेस्टिभलबाट उत्साहित हुँदै यो वर्षपनि रुस्लान भोड्काको..
उद्योगीले चिनीको मूल्य २४ प्रतिशत बढाए, अब कति पुग्यो मुल्य ?
काठमाडौं । चिनी उद्योगीले चिनीको मूल्य बढाउने निर्णय गरेका छन्।चिनीको कारखानाको द्वार मूल्य ६३ रुपैयाँ थियो। सरकारले उखुको नयाँ मूल्य निर्धारण गरेको भन्दै उद्योगीले चिनीको करिब २४ प्रतिशतले बढाएर मुल्य ७८..
विदेशी विज्ञापन डबिङ गरेर प्रसारण गर्न नपाइने, अन्य कुन कुन विज्ञापन गर्न पाइदैन हेर्नुहोस
काठमाडौँ। सरकारले विज्ञापन नियमनसम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको छ। सरकारले पेस गरेको विज्ञापन नियमन विधेयक अनुसार अब नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले सरकारले तोकेको मितिदेखि विज्ञापनरहित प्रसारण..
हवाई इन्धनको मूल्य घट्यो, अब लिटरको साढे ९४ रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले आन्तरिक उडानतर्फका लागि हवाई इन्धनको मूल्य घटाएको छ । यसअघि लिटरको १०४ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनको मूल्यमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ घटाएर ९४ रुपैयाँ..
काठमाडौं । सरकारले नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा सुरेन्द्र प्रसाद पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका महाप्रवन्धक समेत रहेका पौडेललाई सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले निगम सम्हाल्ने जिम्मा दिएको हो..
'पैसा यहीँ छ’ ‘विदेश जानु पर्दैन, यसरी कमाउन सकिन्छ !
हिँजोआज धेरै युवा गरीबीका कारण धन कमाउन विदेश जान्छन् । आत्मविश्वास र लगनशीलता भए पैसा कमाउन विदेश जानुपर्दैन, देशमै राम्रो आम्दानी र इज्जतका साथ बस्न सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण बनेका..
नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा डिल्ली अधिकारी नियुक्त
काठमाडौं। नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा डिल्ली अधिकारी नियुक्त भएका छन्। अन्तिम प्रतिस्पर्धामा रहेका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक बुद्धि आचार्य र संगिता अर्याललाई पछाडि पार्दै अधिकारी टेलिकमको एमडी नियुक्त भएका हुन्। सूचना तथा..
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले पछिल्ला वर्षमा निरन्तर नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । प्राधिकरणले स्थापनापछि पहिलोपटक आव २०६८/६९ मा नाफा आर्जन गरेको थियो । पछिल्ला वर्षमा पनि..
चितवन । भारतीय सीमा क्षेत्रका नेपाली बजार हुँदै कुखुराको अण्डा भित्रन थालेकाले नेपाल अण्डा उत्पादक संघले रोक्नका लागि निगरानी बढाएको छ । संघको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुले नियमित रुपमा त्यस्ता..
यि हुन् गुणस्तरहीन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने एघार कम्पनी
काठमाडौं । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन गर्ने १८ उद्योगलाई कारवाही गरेको छ । विभागले चालू आर्थिक वर्षमा गुणस्तर मापदण्डलाई पूरा नगरी सामान उत्पादन गर्ने उक्त उद्योगलाई..
फेरी घटयो पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य, अब कति ?
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घटाएको छ । निगमले बुधवार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर २ रुपैयाँ दरले घटाएको..
ट्याक्सीको भाडा बढायो सरकारले, अब १ किलोमिटरमा ५३ रुपैयाँ भाडा उठ्ने
काठमाडौँ। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ट्याक्सीमा मिटर भाडा समायोजनको काम अगाडि बढाएको छ। विभागले गत असोज ७ गते सार्वजनिक बसमा भाडा बढेसँगै ट्याक्सीमा पनि १० प्रतिशत भाडा बढाउने यातायात व्यवस्था..
३ सयवटा विद्युतीय बस किन्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले ३ सय विद्युतीय बस किन्ने निर्णय गरेको छ । गत ६ गते र ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले सरकारले ३ सय..
रोयल इन्फिल्ड बाइकको ‘ट्रेजर हन्ट राइड २०१८’
काठमाडौं । नेपालमा रोयल इन्फिल्ड मोटरसाइकलको आधिकारीक विक्रेता एम भी दुगड ग्रुप अन्र्तगतको विवेक अटोमोवाइलस्ले पौष ०८ गते रोयल इन्फिल्ड ‘ट्रेजर हन्ट राइड २०१८’ सफलता पूर्वक सम्पन्न गरोको छ ।..
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो, पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मुल्य अब कति ?
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले मंगलबार राती १२ बजेपछि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । आयल निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोलमा २ रुपैयाँ घटाएको हो । नयाँ मूल्यअनुसार..
नेपालमा ठूला भारु नोट प्रतिबन्धले भारतमा हल्लीखल्ली
काठमाडौं । नेपालमा सरकारले भारु १ सय भन्दा माथिका नोट प्रचलनमा रोक लगाएको विषयले छिमेकी भारतमा निकै हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । सबैजसो भारतीय सञ्चार माध्यमले यसबारेमा निरन्तर रुपमा समाचार प्रकाशन–प्रसारण..
दुग्ध वितरण आयोजनाको क्षमतामा सुधार, अब प्रतिघण्टा पाँच हजार लिटर दूध प्रशोधन गर्ने
हेटौँडा । सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानको हेटौँडा दुग्ध वितरण आयोजनाले गुणस्तरीय दुग्ध पदार्थको उत्पादन तथा बिक्रीका लागि उत्पादन क्षमताको विस्तार एवं सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्रतिघण्टा तीन..
अब भारु २००, ५०० र २००० नोट नेपालमा बोक्दा जेल जानुपर्ने
काठमाडौं । नेपालमा भारतीय २००,५०० र २००० दरका नोट बोक्दा जेल जानुपर्ने भएको छ । सरकारले सो दरका नोटहरु नेपालमा बोक्नु गैरकानूनी हुने व्यवस्था लागु गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को गत सोमबार..
कपडा उद्योगीलाई बैंकको ब्याजमा अनुदान, भन्सारमा छुट
काठमाडौं । सरकारले आन्दोलनरत कपडा उद्योगीहरुको माग सम्बोधन गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कपडा उद्योगीहरुलाई बैंकको ब्याजमा अनुदान दिने, भन्सार छुट दिने लगायतका निर्णय गरेको हो । उद्योगीहरुको माग..
नवजीवन सहकारीले ४ महिनामै आर्जन गर्‍यो डेढ करोड मुनाफा, शेयरधनीलार्इ १८ प्रतिशत लाभांश
काठमाडौं । कैलालीको धनगढीमा प्रधान कार्यालय रहेको नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेडले चालु अर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को र्कािर्तक मसान्तसम्ममा मात्रै १ करोड ४३ लाख २ हजार कुल मुनाफा आर्जन गर्न सफल..
काठमाडौं । राजश्व अनुसन्धान विभागले चालू आर्थिक वर्षका ४ महिनामा भन्सार छल्ने ४२ वटा फर्मविरुद्ध पौने ६ अर्ब रुपैयाँको विगो दावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले एक महिनाको अवधिमा..
पञ्जीकरण नहुने सवारी पुस १ गतेदेखि सडकमा गुड्न प्रतिवन्ध, पञ्जीकरण गर्न के गर्ने ?
काठमाडौँ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम मङ्सिर मसान्तसम्म यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण नहुने सार्वजनिक यातायात पुस १ गतेदेखि गुड्न नपाउने भएका छन् । उद्योग अथवा कम्पनी रजिस्ट्रारको..
अब धान धितो राखेर कृषि ऋण
काठमाडौं । बुटवल उपमहानगरपालिकाले पहिलो पटक किसानको धान धितोमा राखेर कृषि ऋण प्रदान गर्ने प्रक्रियाको शुरूवात गरेको छ । धान धितो कार्यक्रम नमूना र पहिलो प्रयास भएको जनाइएको छ । खेतीयोग्य..
अब मिटर रिडिङ गर्न ग्राहकको घर घरै जानु पर्दैन, प्राधिकरणले भित्र्यायो ‘एडभान्स मिटरिङ’
काठमाडौँ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ग्राहकको घर तथा कार्यालयमा नै नगई प्रविधिको प्रयोग गरेर मिटर रिडिङ गर्न सक्ने प्रविधि भित्र्याएको छ । प्राधिकरणले सो प्रविधिलाई एडभान्स मिटरिङ इन्फास्टक्चर (एएमआई) नाम दिएको छ..
घट्यो पेट्रोल, डिजेल र मटितेलको मूल्य, अब कति पर्छ ?
काठमाडौं । सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मटितेलको मूल्य घटाएको छ । राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रतिलिटर २/२ रुपैयाँ घटाएको निगम सञ्चालक समितिका सदस्य अरिबन्द अग्रवालले जानकारी दिए । भारतीय..
विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य घट्दा किन मुल्य समायोजन गर्दैन निगम?
काठमाडौं। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनको विषयमा नेपाल आयल निगमले चासो देखाएको छैन । निगमले इन्धनको मूल्य बढेर आउँदा तत्काल लागू गरे पनि मूल्य घट्दा भने त्यसको कार्यान्वयनमा आलटाल गर्दै आएको..
९० दिनका लागि व्यापार युद्ध रोक्न अमेरिका-चीन सहमत
काठमाडौं । अमेरिका र चीन ९० दिनका लागि नयाँ ब्यापार शुल्क निलम्बन गर्न सहमत भएका छन्, ता कि यो बीचमा दुई देशबीच सम्वाद होस् । दुई देशबीच ‘व्यापार युद्ध’ सुरु भएपछि..
Results 889: You are at page5of 30